Heliocentrism: ihe ọ bụ, onye gosipụtara ya na ihe ọ mejupụtara | Network Meteorology
N’oge gara aga, e chere na mbara ala nile gbara ụwa gburugburu. A maara tiori a dika geocentrism. Mgbe e mesịrị na narị afọ nke XNUMX bịara Nicolaus Copernicus ikwu na ọ bụ anyanwụ dị n'etiti etiti ụwa. Ọ bụ akụkụ nke mbara ala ndị ọzọ dị na mbara igwe. A maara tiori a dika heliocentrism.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara heliocentrism, njirimara ya na isi ọdịiche dị na geocentrism.
1 Njirimara nke heliocentrism
2 Obere ihe omuma nke Copernicus
3 Heliocentrism na geocentrism
Njirimara nke heliocentrism
N'etiti narị afọ nke XNUMX, echiche heliocentric ma ọ bụ heliocentrism nke Nicolaus Copernicus kwuru chere na anyanwụ bụ etiti nke eluigwe na ala, na mbara ala na kpakpando na-agagharị gburugburu ya kama ụwa, dị ka e chere kemgbe narị afọ nke abụọ AD .
Tupu mbipụta na mgbasa nke Copernicus's De Revolitionibus Orbium Coelestium (Na Revolutions nke Celestial Orbs, 1543), echiche a kacha mara amara na nke anabatara na Europe bụ echiche nke onye mmụta mbara igwe nke Hellenist bụ Claudius Ptolemy (narị afọ nke abụọ AD). Ptolemy kwadoro nkwenkwe Aristotle na ụwa bụ etiti nke eluigwe na ala wee kee ihe atụ iji kọwaa ngagharị dị iche iche nke anyanwụ, mbara ala na kpakpando gburugburu ụwa, nke ekpughere na ọrụ ya Almagest, nke ndị Arab na ndị Kraịst kesara. A gbasara ya nke ọma wee rue narị afọ nke XNUMX.
Onye edemede mbụ nyere echiche na anyanwụ bụ etiti nke eluigwe na ala bụ Aristarchus nke Samos (270 BC). Ọ bụ onye senti na Ọbá akwụkwọ nke Alexandria. Ọ chọpụtakwara nha ụwa na anya dị n’etiti ụwa na anyanwụ. .nweta. Mana echiche a agaghị emeri nke Aristotle mepụtara. E doziri ụwa, gbara ya gburugburu site n'ọtụtụ usoro nke anyanwụ, ọnwa, mbara ala na kpakpando ndị ọzọ. Usoro a mechara Claudius Ptolemy (145 AD), onye ọzọ si na Library nke Alexandria zuo oke.
Mana anyi aghaghi ichere ruo na narị afọ nke XNUMX, na ọrụ nke onye ụkọchukwu Polish, onye mgbakọ na mwepụ na onye na-enyocha mbara igwe Nicholas Copernicus, tupu ụwa nwere ike iji dochie anya anyanwụ wee bụrụ etiti nke eluigwe na ala. Ozizi heliocentric na-etinye anyanwụ n’etiti mbara igwe, ụwa, mbara ala ndị ọzọ, na kpakpando na-agbakwa ya gburugburu. Copernicus chekwara na ụwa nwere ụdị mmegharị atọ: ngagharị n’anyanwụ, ntụgharị, na ngagharị gburugburu gburugburu ya. Copernicus ọkọnọ ukpepn̄kpọ esie ke nnennen ekikere oro ekenen̄erede an̄wan̄a ye ke okpokoro ye ke nsio nsio ibat man ẹfiọk nte ntantaọfiọn̄ ẹsan̄ade.
N'akwụkwọ ahụ e kwuru n'elu, Copernicus kwuru ihe ndị a gbasara heliocentrism:
"Akụkụ niile na-agba gburugburu Anyanwụ, nke dị n'etiti ha niile [...] mmegharị ọ bụla nke yiri ka ọ ga-eme na mpaghara nke kpakpando a kwụpụtara abụghị n'ezie n'ihi mmegharị ọ bụla nke ikpeazụ, kama ọ bụ ngagharị nke ụwa ".
Obere ihe omuma nke Copernicus
A mụrụ Nicolás Copernicus n'ezinụlọ bara ọgaranya nke ọrụ ya bụ azụmahịa. Otú ọ dị, ọ bụ nwa mgbei mgbe ọ dị afọ 10. N’ịbụ onye owu ọmụma chere, nwanne nna ya lekọtara ya. Mmetụta nke nwanne nna ya nyeere Copernicus aka inwe nnukwu mmepe n'ọdịnala ma mekwa ka ndị mmadụ nwekwuo ọchịchọ ịmata eluigwe na ala.
N’afọ 1491, ọ banyere Mahadum Krakow n’okpuru ntuziaka nke nwanne nna ya. E kwenyere na ọ bụrụ na Copernicus enweghị mgbei, Copernicus agaghị abụ naanị onye ọchụnta ego dị ka ezinụlọ ya. Ugbua n'ọkwa dị elu na mahadum, ọ gara n'ihu ịga Bologna iji mezue ọzụzụ ya. Ọ gara ọmụmụ ihe na iwu iwu ma nweta nduzi site na mmekọrịta mmadụ na Italiantali. Omume omenala niile nke oge ahụ nwere mmetụta doro anya na mmụọ nsọ ya iji zụlite echiche heliocentric nke dugara na mgbanwe ahụ.
Nwanne mama ya nwụrụ na 1512. Copernicus gara n'ihu na-arụ ọrụ n'ọkwa ụka nke canonical. Ọ bụrịrị na 1507 ka ọ kọwara nkọwapụta izizi ya gbasara mbara igwe. N'adịghị ka ihe echere na ụwa bụ etiti nke Eluigwe na Ala na mbara ala niile, gụnyere Sun, gbara ya gburugburu, ekpughere ihe megidere ya. Mana ọrụ mechara mee ka a mata echiche ya, On the Revolutions of the Celestial Orbs, bipụtara na 1543, otu afọ ahụ Copernicus nwụrụ site na ọrịa strok.
Heliocentrism na geocentrism
Na tiori a, achoputara ka anyanwu siri buru ebe etiti igwe na igwe n’abia. Na ndabere nke a heliocentric tiori, ndị niile na-amụ gbasara mbara igwe bidoro imepụta ma kesaa ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke atụmatụ ahụ. N'ihi echiche a, a na-ewere Nicholas Copernicus dị ka onye na-enyocha mbara igwe dị ịtụnanya. Nchoputa gi nile banyere eluigwe na ala aghaghi ịdabere na ncheputa nke mbara ala gbara gburugburu anyanwu.
Ọrụ Copernicus agbasawanyela ịkọwa na ịgbachitere echiche heliocentric n'ụzọ zuru ezu. N’agbanweghị ihe kpatara ya, iji kpughee echiche nke gbanwere nkwenkwe niile dị ugbu a banyere mbara igwe, a ga-eji ihe akaebe nwere ike ịgbagha echiche ahụ mee ihe.
N'ime ọrụ ahụ, anyị nwere ike ịhụ na eluigwe na ala nwere usoro okirikiri njedebe, nke isi mmegharị niile dị okirikiri, n'ihi na ọ bụ naanị mmegharị kwesịrị ekwesị maka ọdịdị nke ihe ndị dị na mbara igwe. Na edemede ya, enwere ike ịchọta ọtụtụ nkwenye na echiche nke eluigwe na ala tupu nke a. Ọ bụ ezie na ụwa abụkwaghị etiti na mbara ala ọzọ anaghịzịkwa agba gburugburu, ọ nweghị otu ebe etiti ihe niile dị n’eluigwe na-ekerịta n’usoro ya.
N'aka nke ọzọ, na mbụ geocentrism nọ n'ike. Ọ bụ ihe nlereanya nke mebere eluigwe na ala na ọnọdụ ụwa. Otu n'ime okwu ndị bụ isi nke usoro a bụ:
Iswa bu etiti eluigwe na ala. Ọ bụ akụkụ ndị ọzọ nke mbara ala ndị nọ na ya.
Iswa bụ ụwa nke edoziri n’elu ụwa.
Ọ bụ ụwa pụrụ iche na pụrụ iche ma ọ bụrụ na anyị atụnyere ya na akụkụ ndị ọzọ dị n’eluigwe.. Nke a bụ maka na ọ naghị agagharị ma nwekwaa njirimara pụrụ iche.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere heliocentrism na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Heliocentrism